Global Voices teny Malagasy » Bethlehema: Nigidraka tanaty noely ny mpitondra fivavahana Armeniana sy Grika · Global Voices teny Malagasy » Print
Bethlehema: Nigidraka tanaty noely ny mpitondra fivavahana Armeniana sy Grika
Voadika ny 30 Desambra 2011 3:48 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Azia Afovoany sy Kaokazy, Eoropa Andrefana, Armenia, Gresy, Palestina, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
Nifampigidraka indray ny mpitondra fivavahana Armeniana sy Grika, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia tao amin'ny Fiangonana Nahaterahana tao Bethlehema, izay niteraka fahagagana sy sangisangy teo amin'ny mpiserasera manerantany. Heverina fa ny nahatonga ny fifandirana dia hoe ny faritra aiza ao am-piangonana no tokony hodiovin'ny relijiozy tsirairay avy, tsy zava-baovao moa ny gidragidra tahaka izao.
Tamin'ny Novambra 2008, ohatra, efa nifandona tao amin'ny Fiangonana Fasan'i Jesoa tao Jerusalem  ny moanina Armeniana sy Grika.
Nilaza ny heviny  i Lisa Shafer: Mpanoratra Bilaogy.
Okay, iray amin'ny fety kristiana lehibe ny noely na dia avy amin'ny fombam-pivavahana tsy kristiana aza no nandraisana azy (ny 25 Desambra, ny hazo krismasy, ny hamaitsoana, ny hazavana, ny fanomezana — tsy avy amin'ny fombam-pivavahana kristiana daholo. Tiako koa izany fandrabirabiana izany an.) Ary avy any Bethlehema no iaingan'izany…..
Dia nahita ity sary ity tamin'ny yahoo androany ity aho: Relijiozy Grika sy Armeniana, manadio ny fiangonana ao Bethlehema izay ifampizarany amin'ny Katolika, nivadika ho ady fifanipazana kifafa tamin'ity herinandro ity noho ny fifandirana amin'ny hoe iza no manadio ny faritra aiza ao am-piangonana.
Ary izany rehetra izany dia tsy maintsy nosarahan'ny polisy Palestiniana, izay heverina ho miozolomana. Tena mba tafahoatra ihany ny hatevin'ny fandrabirabiana. Tokony ho mampitokelaka raha tsy mandreraka sy zazazaza fanao — sady mampalahelo.
Nihorakora-pifaliana mihitsy moa ny mpisera Twitter nitatitra ny gidraka.
@pixie_pete : Ho lasa lalao olaimpika vaovao ve ny adin'ny relijiozy ao Bethlehema? […]
@TCoziLondon : Gidraky ny relijiozy mpifandrafy ao Bethlehema. Mampitokelaka mihitsy! […]
@metalvicar Rachel : ady faritra ilay izy…Mifandroaka sy mifanambany ny relijiozy’ BBC News – Gidraky ny Relijiozy ao Bethlehema […]
@meneedbeer : Relijiozy Grika sa Armeniana: iza no kinga kokoa amin'ny fanadivoana ny fiangonana? Fomba tokana ihany no ahafantarana izany- MIADY! […]
@AhmNoHere : “Tsy nisy ny nosamborina satria olon'Andriamanitra daholo ry zareo” WTF?!? […]
@Rohypgnosis : Fioo! Asa tsaran-dry zalahy fa difotry ny ‘Fitiavan'i Jesoa’ ry zalahy na TENA lasa masiaka ry zalahy 😀 […]
@nickjtaylor : Fiadanana indrindra ho ety ambonin'ny Tany: […] Antony hafa indray tsy andraisako ny fivavahana amim-pahamatorana.
Ny bolongan'i Fr Ray Blake kosa indray naka fotoana ieritreretana :
Adin'ny Grika sy ny Armeniana ao amin'ny toerana masina: gidragidra ve, sa fampisehoan-kery kristiana sa vondrona roa samy resy lahatra fa ry zareo no manana ny rariny. Tsy mba zava-tsy fahita ny fihoaram-pefy tahaka izao aty amin'ny Tany Masina.
Na izany aza tsy gaga  ny bolongana Fr Stephen Smuts:
[…] teo amin'ny relijiozin'ny Fiangonana Nahaterahana tao Bethlehema indray tamin'ity indray mitoraka ity. Niditra an-tsehatra ny relijiozin'ny Grika Orthôdôksa sy ny Apostolika Armeniana mbamin'ny moanina izay mitondra kifafa rehefa hanadio ny fiangonana. Nantsoina ny polisy misahana ny rotaka Palestiniana:
Vavolombelona nanatri-maso koa izany. Jereonareo:
Globalisering, christendom en het Midden-Oosten, kosa niezaka ny nitady lalindalina kokoa ny antony nahatonga ny fifandirana :
Lohahevitra mahaliana izy ity, indrindra rehefa ahiahiako ho mifandraika amin'ny fanavaozana ny fiangonana ity adin-kifafa ity. Efa nilaina an-taonany maro fanavaozana, fanapahan-kevitra noraisin'ny Fahefana Palestiniana herintaona izay na talohaloha kokoa, nohafaninganin'ny tolotry ny Firenena Mikambana, ary mampiady ny fikambanana mampiasa ny fiangonana. Tsy hoe tsy resy lahatra amin'izay tokony atao ry zareo, fa mety hampihena ny zon'ny tsirairay sy ny rehetra ao am-piangonana ny fandoavam-bola ho amin'ny fanamboarana, tahaka ny fanadiovana. Iza no handoa ary rahoviana? Mety azo atao ihany ny mahakôpy ny fifandirana noho ny fiovana lehibe tahaka izany, sy ny gidraka ataon'ny moanina tanora sy mazoto sasantsasany …
Na izany aza dia tahaka ny tsy mahalala ny fombam-pivavahan'ny roa tonta ny mpiresaka androany sy ny fifandraisany amin'ny raharaha palestiniana nefa tsy manazava amin'ny fahagagan'izao tontolo izao amin'ny gidraka tahaka itony izany. Anisan'ny mahavariana, mazava loatra, ny fifanalavirana eo amin'ny tanjona kristiana hisian'ny fiadanana ety ambonin'ny tany sy ny gidraka hita maso ataon'ny relijiozy – indrindra rehefa mahafa-po jerena ny ady amin'ireto kifafa vaovao mahafinaritra vao novidiana amin'ity fotoan-dehibe ity. Tsy nisy ny maty na maratra mafy … tia mijery ady mahafinaritra avokoa isika, indrindra rehefa manamafy ny hevitra efa ananantsika momba ny kristianisma, relijiozy ary ny Tany Masina izany – eny, tokony hisy ifandraisany izany, mazava loatra, rehefa mitranga ao Bethlehema, ao amin'ny Fiangonana Nahaterahana, herinandro manaraka ny noelin'ny Katolika sy ny Protestanta, ary eo am-piomanana amin'ny noelin'ny Orthôdôksa – raha misy ny ady diso toerana dia ity iray eto amin'izao fotoana izao ity.
Eny, tsy fantatra intsony ny antony ambadiky ny toe-javatra tahaka itony, indrindra rehefa nanakaiky noely tahaka itony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/12/30/26922/
 nifandona tao amin'ny Fiangonana Fasan'i Jesoa tao Jerusalem: https://globalvoicesonline.org/2008/11/10/israel-armenian-greek-monks-brawl/
 Nilaza ny heviny: http://lisashafer.blogspot.com/2011/12/situational-irony-christianity-in.html
 @metalvicar Rachel: https://twitter.com/#!/metalvicar/status/152076973567508480
 naka fotoana ieritreretana: http://marymagdalen.blogspot.com/2011/12/church-cleaning-in-bethlehem.html
 tsy gaga: http://frstephensmuts.wordpress.com/2011/12/28/clerics-fight-in-church-of-the-nativity-bethlehem/
 antony nahatonga ny fifandirana: http://69422.weblog.leidenuniv.nl/2011/12/28/why-are-the-clerical-scuffles-in-the-nat